Acer japonicum - umhlobiso omuhle endlini
Acer japonicum - enhle esimila Ornamental, okuyinto has umbala enhle amaqabunga ehlobo - kusuka eluhlaza kuya shades ehlukahlukene, ophuzi, onsundu noma ngokubomvu. Ngo ekwindla, izihlahla emangalisayo langa izingubo. inhlanganisela zokuhlobisa leaf ukuma, nomqhele omuhle nombala esingakhulumekiyo kudala umbukwane omangalisayo.
Ngaphansi kwesihloko esithi "Acer japonicum" isitshalo ezifihliwe zinhlobo ezimbili: Acer japonicum futhi Acer palmatum. Plants of the uhlobo lokuqala - a isihlahla esidabuka elincane Japan. Yiba uhlobo oluhlukile umqhele, ubukhulu nohlobo amahlamvu. Summer amahlamvu has ezahlukene shades of eluhlaza umbala, ekwindla futhi ngaso shades eziningi phuzi futhi zibe bomvu, yezinye izinhlobo umbala onsomi. Sine ukudayiswa lezi zitshalo ezingajwayelekile kakhulu. Okuningi chithi saka ezweni lethu ithole uhlobo Acer palmatum - Maple noma dlanelistny emise okwe-fan. Izitshalo zalolu hlobo, kukhona ezingaphezu kwenkulungwane izinhlobo. Bonke zihlukaniswe sub-ngamaqembu ngokusho ukuphakama, umqhele ukuma amahlamvu. Izitshalo yalolu hlobo lapho usukhulile kungaba ambalwa amashumi amasentimitha ukuphakama futhi 7-8 amamitha. Ziyahlukahluka kuye futhi uhlobo umqhele. Kungase kube uyakhala, ngobuso, eyindilinga, mpo, isambulela. Amaqabunga kungaba ezinhlanu kuya nanye izindwani. izinhlobo Ziningi amahlamvu ezisencane lowehlukile ngokuphelele (ezibomvana, ezinsomi, beige, njll), Yikuphi unikeza isitshalo ukubukeka zokuhlobisa more.
Letha injabulo yobuhle Acer japonicum futhi ngesikhathi izimbali. It has a bright violet-bomvu izimbali, okuyinto avele ngaphambi ukuqhakaza amahlamvu. lionfish Mature njalo hang ngaphansi amahlamvu, futhi ngezinye izikhathi Ukucinga nge ukukhanya onqenqemeni.
Imigomo nemibandela Ubusika yethu Acer japonicum ehlupheka kabi kakhulu. Lezi zitshalo baye bazama acclimatize ezinsukwini zika eRussia tsarist, bese lezi zinto asebenzelana ngayo izingadi zezimila yase-USSR, futhi ekugcineni, balimi abaningi eRussia zanamuhla. Ngeshwa, lolu hlobo unpromising elibonakalayo yokuzalanisa indlela ephakathi nendawo. Ungathenga maple Japanese, kodwa kuyodingeka zikhule ebhodweni futhi alethe ebusika evulanda zembozwe noma abamba ukushisa, kwi emphemeni nhlobo cool (kodwa hhayi abandayo) igumbi. Japanese maple izinhlobo ukuthi kungenziwa itshalwe ebhodweni, impela eningi. Uma ucabangela ukuthi izindleko isitshalo esincane ofana noka-kweqembu ezinhle izimbali, kungenzeka ukukhokhela okunethezeka enjalo.
Entsha izinhlobo yemifino Shaina lapho usukhulile ifinyelela 1.5 amamitha. Ingabe elicinene umqhele amahlamvu dissected ekwindla - carmine abomvu. Lolu hlobo esihle uyozizwa esitsheni noma uMtshali. I engavamile amahlamvu Maple Wilson Pink into encane has a entwasahlobo color pink Flamingo, ekwindla - kusukela obomvu orange okukhanyayo. Lesi simila efomini omdala ungaba ukuphakama 1.4 amamitha, kuyinto ephelele yokutshala izimbiza noma iziqukathi.
Japanese maple izinhlobonhlobo abaningi, banezizathu ukubukeka ekhangayo. Uma uzimisele ukubanika imali ezinye ukunakwa, Bayokujabulela wena ngemibala engavamile futhi ukuma zokuhlobisa kusuka kwentwasahlobo kwekwindla. Futhi ngisho ngaphandle kwamahlamvu isihlahla ingavuthi kahle maphakathi embukisweni ezithakazelisayo, into esemqoka - isifiso nje kancane.
7 amathiphu, indlela repot ikhona imbali
Clematis macranthon: grade isithombe
Imiculo AmaConifers - indlela yokunakekela izitshalo
Shrub dogwood: zinhlobo, betshala nokunakekela
Yucca, abanakekela ekhaya.
Umsunguli iconography Russian Alimpiy uMfundisi nabalandeli yakhe ekhaliphile
Indlela Ngokushesha Make Money Online
Uyithola kanjani toxoplasmosis? Izindlela ukutheleleka toxoplasmosis
Yenza imoto ekhaya
Iresiphi yezinkukhu zenkukhu: amathiphu okupheka
Isevisi ye-Lsass.exe izolayisha iprosesa (iWindows 7): siyini isizathu nokuthi ungayilungisa kanjani inkinga?
Kuyini ikhasimende ukwethembeka kanye nendlela yokuyithola?
Iseluleko Legal - kuyinto ... A Iseluleko incazelo umsebenzi
20 sisebenzisa i-microwave, okuyinto nakanjani kuyokushiya umangele
Indlela ukupheka salmon pink e multivarka? Umucu salmon e multivarka
Indlela wehliswa - ezejwayelekile kanye Mint